09 Jun, 2014 - 15:06	 2014-06-09T15:51:36+00:00 2014-06-09T15:51:36+00:00 0 Views
MUTSIKA dzedu tine zviitiko nezviratidzo zvatinoti tasangana nazvo toti zvinoshura. Mashura aya tinoatora sokuti ari kutoreva kana kudimikira chimwe chinhu chatinenge tichazosangana nacho.
Vakuru vanotove netsumo inoti, “Chati homu chareva”. Tikatora muenzaniso wekamhuka kanonzi “tsindi” kana “hovo”, kakaonekwa kachidimbura nemberi kwenzira yauri kufamba nayo, wotobva waziva kuti zvauri kufambira zvichapata kana kuti mashangurapata.
Zvichida uri kufambira kana kutevera chikwerete unenge uchanoshaiwa chouviri.
Regai tichisakura munda wacho:
1. Kurwa kwehuku pedyo newe – kushura kuuya kwavaenzi.
2. Kuchema kweimbwa dzichibvumirana — muchawirwa nerufu.
3. Kuvaviwa pakati pechanza — uchabata mari.
4. Kupfura-pfura kweziso nechekuzasi — kunoshura kusuwa.
5. Kusangana nenyoka inonzi tsutsukuviri (nyoka ine misoro miviri) — zvinoshura rufu.
6. Kugumburwa kwegumbo rerudyi — uchasuwa.
7. Kuona kachisvosve kanonzi “chishuranyama” — kanoshura kudyiwa kwenyama.
8. Kutenderera kwenjiva pedyo newe – vaenzi vari kuuya.
9. Kuchema kwegwai muchinge moda kuriuraya – zvinoshura rufu. (zviri nane kuchitorisiya).